Bandırma Ferry wuxuu socdaa berrito | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulBandırma Ferry Goes Berrito
15 / 05 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Doomaha Bandirma ayaa berri soconaya
Sannad-guuradii 19-aad ee 101-kii Maajo, safarkii Atatkrk ee Istanbul ku tegey Samsun oo ay la wadaageen kooxda Bandırma Ferry ayaa lagu soo nooleeyey internetka. Bandırma Ferry, oo ka tagi doonta Istanbul 16ka Meey munaasabada "Wadada Qarniga", ayaa imaan doonta Samsun Talaadada, 19ka May. Kabtanka safarkan taariikhiga ah, Haksmail Hakkı Durusu, sidoo kale lama ilaawin. Şehir Hatları AŞ waxaa lagu xusayaa mahadnaq iyo duco iyadoo la booqanayo qabrigii Durusu ee ku yaal qabuuraha Feriköy. Intaa waxaa sii dheer, howlaha İBB ee Maajo 19 ayaa bilaabanaya berri. Dhacdooyinka khadka tooska ah ee internetka waxay qaadan doonaan afar maalmood.
Safarka taariikhiga ah ee Hogaamiyaha Weyn Ataturk uu ka soo qaaday Istanbul kuna socday Samsun oo ay la wadaageen kooxda Bandirma Ferry ayaa loo wareejiyay deegaanka casriga ah sanadkaan cudurka daacuunka. Iyada oo qayb ka ah dhacdada "Dariiqa Qarniga", Bandırma Ferry ayaa ka tagi doonta Istanbul May 16-keeda waxayna joogi doontaa Samsun 19-ka May. Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Istanbul, wuxuu sidoo kale ka qeybqaadan doonaa macsalaameynta Bandırma Ferry oo uu jeedin doono khudbad.
Intii lagu gudajiray safarkan casriga ah, waxaa jiri doona macluumaadyo, fiidiyooyo, wareysiyo iyo riwaayado ku saabsan safarka Mustafa Kemal Atatürk si loo bilaabo Dagaalkii Madax-bannaanida.
IMM WAA IN LAGU SAMEEYO MAY 19 OO KELIYA dhacdooyinka
IMM waxay u dabaal degi doontaa 19ka Maajo, oo Gazi Mustafa Kemal Atatürk uu u soo bandhigay dhalinyarada dalka iyo halka dareenka qaran laga dareemayo habka qotada dheer, oo leh barnaamijyo munaasib ah iyo nashaadaadka khadka tooska ah. Waaxda Dhaqanka ee İBB waxay bilaabeysaa waxyaabaha u gaarka ah oo ka kooban dokumentiyo, tiyaatar iyo baaritaan filim berri. Iyada oo qayb ka ah dabaaldegyada, Kooxda Dhallinta ee Beylikdüzü ayaa bixin doonta riwaayad 14.00 oo Agaasinka İBB Orchestras wuxuu bixin doonaa riwaayad 18.00. 21.00, filimka "Casharkeenna Atatürk" ayaa la baari doonaa. Barnaamijyada waxaa laga daawan karaa boggaga warbaahinta bulshada ee Waaxda Dhaqanka ee Himilada iyo IMM.
GOBOLKA CAFTAIN CARRUURTA UMA SAMEEYA
Sannadguuradii 101aad ee Hoggaamiyaha Weyn ee Mustafa Kemal Atatürk u aaday Samsun, İsmail Hakkı Durusu, oo ahaa Kabtanka Bandırma Ferry oo watay Atatürk iyo 18-kii hubaysnaa ee loo waday Samsun, lama illaawin. Sinem Dedetaş, Maareeyaha guud ee Şehir Hatları AŞ, kabtanada markabka Çetin Korkmaz, Bilal Rıfat Tiren iyo mashiinka ugu sareeya Ramazan Marangoz ayaa booqday xabaasha Durusu ee ku taal Feriköy Qabuuraha. Ka dib markii ay ubaxyadii ka baxeen qabriga, waxay u duceeyeen Durusu.
Waxaan dooneynay inaan badbaadinno xasilloonidayada "
Hadal gaaban oo laga sameeyay qabrigii Kabtanka İsmail Hakkı Durusu, Maareeyaha Guud ee Magaalada Line Inc. Sinem Dedetaş wuxuu xasuusiyay geesinimadiisa wuxuuna muujiyey sida wanaagsan ee uu ugu mahadcelinayo. Dedetaş wuxuu yidhi:
Onsmail Hakkı Durusu waxa uu si geesinimo leh uga kaxeeyey Atatürk iyo asxaabtiisii ​​kale 16-kii markab dagaal ee duulaanka ku ahaa Istanbul. Wuxuu la halgamay mawjadihii adkaa ee Badda Madoow muddo saddex maalmood ah wuxuuna ku guulaystay inuu rakaabkiisii ​​qaaliga ahaa geeyo Samsun 1919kii Meey. 64-kii Meey, 19 waa maalintii Dagaalkeenii Madax-bannaanida. Xaqiiqdii, Atatürk, oo dan ka leh maanta, ayaa 19-kii Maajo u doortay dhalashadiisa. Waxaan dooneynay inaan xusno geesiyaheena Captain kaasoo taariikhda galay dagaalkii madax-bannaanida oo mar labaad u soo bandhigi mahadnaq iyo ducooyin qabriga. ”
“WAA INAAD LAGUGU BAXDO MAGACA MAGACA”
Iyada oo loo yaqaan 'Band Ferrma Ferry', magaca Captain İsmail Hakkı Durusu, oo rakaabkiisa u qaadanaya Samsun safarkiisa adag ee Badda Madoow muddo saddex maalmood ah, ayaa weli ku nool mid ka mid ah khamriyadii 'Şehir Hatları AŞ'.
WAA MAXAY İSMAİL HAKKI HAKUSU?
İsmail Hakkı Durusu wuxuu ku dhashay Kayseri sanadkii 1871. Markii uu dhammeystay waxbarashadiisii ​​dugsiga hoose iyo sare ee Dugsiga Sare ee Dugsiga Sare ee Zincidere, wuxuu ka qalinjabiyey Dugsiga Sare ee Ganacsiga Magaalada Istanbul Heybeliada. Ilaa 1922, markii uu howlgab noqday, wuxuu kabtan u ahaa markabyo kala duwan. Wuxuu ku dhintay Istanbul sanadkii 1940. Ismacil Hakki sanadkii adı1999 Durusu, Turkiga waxaa lasiiyay markab Maraakiibta bada.
BANDIRMA STEAT KA QAYBGALAY 1925
Bandırma Ferry waxaa laga dhisay Glasgow, Scotland, sanadkii 1878. Markabkan, oo loo qaabeeyey 279 rakaab ah oo xamuul ah iyo xamuul xamuul ah, ayaa laga iibiyay Giriigga sanadkii 1883 waxaana loo magacaabay Kymi. Waxay ku degtay 1891 shil. Ka dib markii la sababay, waxaa laga iibiyay shaqaale ajnabi ah oo ku sugan Istanbul. Markabka gudbay calanka Turkiga waxaa lagu magacaabaa Panderma halkan. Markabkan, oo ku sii jeeday xeebta Badda Marmara, waxaa iibsaday 1910kii Shirkadda Kaluumeysiga ee Ottoman magaceedana waxaa loo beddelay Bandırma. Waxay sii wadday adeeggii illaa 19 wixii ka dambeeyay 1919-kii Meey 1924. Sannadkii 1925-kii, waxaa loo jeexjeexay sidii xoqeystey geeskii dahabiga ahaa.
Baabuurka Aegean ee Baabuurta ayaa iman doona berri
Metrobusku wuxuu amar ku bixiyay Dawladda Hoose ee Ankara in ay tagto Berito
Ceelka Bandelma Port wuxuu isticmaalaa faa'iidada tareenka (Sawir Sawir)
Maanta oo Taariikh ah: 29 Feebarwari 1920 Qaddiyadda Manisa-Bandırma waxaa baabi'iyay ciidammada Qaranka…
Waa kuma İsmail Hakkı Durusu
Wadooyinka Magaalada Inc.
Dugsiga Kabtan Ganacsiga ee Heybeliada
Shirkadda Badda Ottoman
Dusha TCDD Bandırma dekeda dekeda tuurista tuubooyinka dhismaha qandaraasku waxay bixisaa ih